Niampy 39 ny voan'ny Covid-19 Misy marary mafy 6 ao Toamasina
Tafiakatra 527 ny olona tratry ny coronavirus ho an’i Madagasikara nanomboka ny 19 martsa. 69 ny singa notilian’ny IPM teto an-dRenivohitra izay nitambatra tao na ny teto Antananarivo na ny avy any Toamasina, ka olona 10 tamin’ireo no voa, izay avy any Antsinana avokoa.
Ny tany amin’ny Laboaratoire mobile tany Toamasina kosa dia olona 60 no notiliana, ka ny 10 tamin’ireo no nahitana covid-19. Miisa 20 izany ny tranga vaovao tany Toamasina. Ny CICM dia nanao fitiliana 234 ka tranga vaovao 10 no hitany teto Antananarivo. Ho an’ny HJRA Ampefiloha kosa dia 96 ny fitiliana nataony nahitana tranga 9, ka ny 6 avy any Ford Dauphin na Tolagnaro, ary ny 3 tany Toliara. 39 izany ny tranga vaovao nampiakatra ny voa hatrizay ho 527. Niampy 4 ny sitrana ka nampiakatra azy ho 142, ka ny 2 tamin’ireo sitrana vaovao dia teny amin’ny CHU Anosiala, ary ny 2 teny amin’ny CHU Andohatapenaka. Niampy 2 ihany koa ireo marary tena ahiana mafy ny ainy, ka tafiakatra 6 izy ireo amin’izao fotoana izao, izay any Toamasina avokoa. Mijanona ho 2 ny olona nodimandry. Izay mitranga rehetra dia tsy voatery ho vokatry ny covid-19, hoy ny Pr Vololontiana Hanta, manoloana ireo trangana fahafatesana sy olona midaraboka etsy sy eroa. 2 no namoy ny ainy avy amin’ny fahasarotana na “forme grave”, izay tsy voatery ho faty. Tsy hoe rehefa mitondra ny covid-19 ny olona iray, ka namoy ny ainy dia hoe tena tsy maintsy ilay covid-19 no nahafaty azy. Ny fisian’ireny aretina hafa, toy ny diabeta, no mety hiteraka ny “forme critique”, izay mila fanamarinana hoe: ny covid-19 no nahafaty azy, hoy io Profesora io. Misy olona iray manana aretina 4 na 5 ka tsy maintsy dinihina hoe iza tamin’ireo no nahafaty azy, hoy ny fanazavana.